Uzosebenza kanjani umsebenzi wevidiyo we-YouTube ongaxhunyiwe kwi-inthanethi? | Izindaba zamagajethi
EBlumex, ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, sikwazise ukuthi i-YouTube ithathe isinqumo sokushiya imicabango yayo ngemuva futhi iguqule indlela yayo yokucabanga ngokuvumela abasebenzisi bamadivayisi eselula ukuthi badlale amavidiyo ngaphandle koxhumano lwe-inthanethi. Umgomo wale nsizakalo yezinsizakalo ze-Google ezinyangeni ezedlule ukuthi awukwazanga ukugcina ividiyo kunoma iyiphi idivayisi, ngakho-ke iphoqa izinhlelo ezinjenge mctube ukuvuselelwa ukuze kususwe lo msebenzi i-YouTube eyamukelayo ngemuva kweminyaka: ukubukela amavidiyo ngaphandle kokuxhumeka kwe-inthanethi izinsuku ezimbili.
Futhi yilokho, njengoba iwebhu iphawula ZonkeIzintoDAbalingani be-YouTube sebethole i-imeyili lapho ithimba le-YouTube libatshela ngalesi sici esisha sevidiyo esingaxhunyiwe ku-inthanethi. Ngemuva kokugxuma ngizokushiya imibono eyisihluthulelo yokuthi lesi sici esisha sisebenza kanjani ne-imeyili uqobo.
Amaphuzu ayisihluthulelo wamavidiyo angaxhunyiwe ku-inthanethi anikezwa yi-YouTube
Njengoba uzokwazi ukuqinisekisa ngokuhamba kwesikhathi, i-YouTube ikhanyise izinqubomgomo zayo zobumfihlo kumavidiyo ngokuvumela abasebenzisi ukuthi babuke noma iyiphi ividiyo ye-YouTube (ngaphandle kwalapho umsebenzisi engayivumeli) ngaphandle kokuxhumeka kwe-inthanethi okungaguquki isikhathi esingamahora angama-48. Ake sibheke amaphuzu athakazelisayo alesi sici azofika kumadivayisi eselula ngoNovemba:
Ukutholakala: Izotholakala kunoma yiluphi uhlelo lwe-YouTube ngenguqulo yakamuva ezokwethulwa ngoNovemba.
Yimaphi amavidiyo? Singabuka noma yiluphi uhlobo lwevidiyo ngaphandle kweziteshi zokukhokha namavidiyo angenawo lo msebenzi ocushiwe (uma umnikazi efuna wona).
Kanjani?: Mane ngokuchofoza ku- "Engeza kudivayisi" singajabulela ividiyo kaningi ngendlela esifuna ngayo amahora angama-48.
Lapha ngikushiya ne-imeyili uqobo:
Sibhalela ukukwazisa ngesici esisha esihlelelwe ukukhishwa ngoNovemba esithinta okuqukethwe kwakho. Lokhu kusebenza kuyingxenye yezinguquko eziqhubekayo zokunikeza abasebenzisi amathuba amaningi okujabulela amavidiyo neziteshi kuselula ye-YouTube. Ukusebenza kukhishwa nabo bonke ozakwethu kunikwe amandla kepha ungakukhubaza manje uma ufisa. Ngezansi kuneminye imininingwane ngokusebenza nemiyalo yokuthi ungayikhubaza kanjani.
Kuhlelo lokusebenza lwe-YouTube, abasebenzisi bazokwazi, ngokusebenzisa "ukwengeza kudivayisi" ukusebenza okutholakala kumavidiyo nakuhlu lwadlalwayo, ukuqoka okuqukethwe okuthile okungabukwa isikhathi esifushane lapho ukuxhumana kwe-inthanethi kungatholakali. Ngalokhu, uma umsebenzisi ehlangabezana nokulahleka kokuxhuma, usazokwazi ukubuka amavidiyo awangezile kumadivayisi akhe isikhathi esilinganiselwe esingafika kumahora angama-48. Uma ngabe idivayisi ingaxhunyiwe kwi-inthanethi ngaphezu kwamahora angu-48, okuqukethwe ngeke kubukeke ungaxhunyiwe ku-inthanethi kuze kube yilapho idivayisi ixhumeka kabusha. Uma sekuxhunyiwe, iwindi elingaxhunyiwe ku-inthanethi liyaqabuleka futhi umbukeli uyakwazi ukubona okuqukethwe futhi.
Isebenza kanjani kubabukeli?
Kusukela ekhasini lokubuka ngokusebenzisa ukusebenza kwe- "add to device", ababukeli bazokwazi ukuqoka okuqukethwe okuthile okungabukwa isikhathi esifushane lapho bengenakho ukuxhumana. Okwamanje lapho umsebenzisi engasenakho ukuxhumana, bazokwazi ukubuka amavidiyo nezinhla zokudlalayo abazingeze kudivayisi yabo ngokungena kumavidiyo ngesigaba esithi "kudivayisi".
Isebenza kanjani kozakwethu: amathiphu nezibalo?
Izikhangiso ze-Google zizosebenza ngokuhlobene nokuqukethwe, futhi ukubukwa kuzongezwa kusibalo esiphelele. Sicela wazi ukuthi amanye amafomethi wesikhangiso angeke asekelwe, namavidiyo aqashiswayo noma athengwayo ngeke afakwe kulo msebenzi.
Konke okuqukethwe kuyasebenza. Kepha ungakhubaza manje.
Imininingwane engaphezulu - i-YouTube izokuvumela ukuthi ubuke amavidiyo ungaxhunyiwe ku-inthanethi kusuka ngoNovemba
Umthombo - ZonkeIzintoD
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Amavidiyo we-YouTube angaxhunyiwe ku-inthanethi azosebenza kanjani?
Buyekeza i-LG G2, i-smartphone enamasentimitha angu-5,2 ne-Snapdragon 800